Afaka mitaingina Trek Lexa ve ny lehilahy? - Hevitra
Tena > Hevitra > Famerenana lerek lexa - ahoana ny fomba handaminana azy
Famerenana lerek lexa - ahoana ny fomba handaminana azy
Afaka mitaingina Trek Lexa ve ny lehilahy?
Ny andiany 1 sy nyLexaandian-tantara dia mitovy amin'ny tsirairay. Ny andiany 1 dia tsy voafaritra manokana ho an'ny lahy sy ny vavy, ary ny farany ambony 1.5 dia kely fotsiny amin'ny maha-ao amin'ny andiany Madone. nylexanantsoina manokana ho an'ny vatan'ny vehivavy ny andiany, miaraka amin'ny tendrony avo kokoaLexaSLX fohy fotsiny amin'ny maha-ao amin'ny andiany Silque.
Marika tsara ve ny trek?
MoadianyBisikileta AnyTsara? Eny,dianybisikileta no tenatsara.dianymanana tantara efa ela momba ny fanaovana bisikileta manara-penitra izay ampiasain'ny mpandeha bisikileta vao manomboka, fialamboly ary bisikileta manerantany.dianyNy bisikileta dia maharitra mandritra ny fotoana lava ary manana ny lanjany lafo dia lafo taorian'ny taona nividy.
Orinasa goavambe miaraka amin'ny Trek izy ireo, saingy um (miakanakana) (mihomehy) Ie, afaka manapaka isika.
Hofaranako amin'ny gadra rojo vy fotsiny izany. (mozika faly) Salama daholo, Mike Kazimer no anarako. Tongasoa eto amin'ny fitsapana Pinkbike Enduro sy Freeride.
Jery ​​bisikileta miaraka amin'ny dia lavitra mihoatra ny 160 milimetatra izay mifantoka midina fa mbola azo dakaina hatrany ambony. Aorianako dia manana an'io Trek Slash vaovao io aho. Ity maodely 2021 ity dia nahita fanavaozana manan-danja vitsivitsy tamin'ny kinova teo aloha tamin'ny endrika geometry lava sy fisaka kokoa, dia lavitra kokoa, ary fitahirizana tsakitsaky fanampiny.
Ny tanjon'ny bisikileta dia mbola tsy miova, natao ho bisikileta enduro, na bisikileta fotsiny ho an'ny olona iray maniry handeha haingana amin'ny tany mikitoantoana. Andao atomboka amin'ny fampiatoana. Ity bisikileta ity dia mbola mampiasa ny famolavolana fampiatoana Trek ABP miaraka amina pivot frein.
Amin'ny ankapobeny dia manana ny teboka misy ny pivot manodidina ny axle any aoriana izy avy amin'ny kinova teo aloha ary eny dia toa mitaky fotoana iray ihany io. Ao amin'ity kinova ity izy ireo dia nifantoka tamin'ny damper mihitsy. Amin'ity tranga ity dia mahazo dampers RockShox Super Deluxe ianao amin'ny tanjaka ambony amp amp hazo tsy tapaka.
Amin'ny ankapobeny, midika izany fa mivoaka avy eo ambanin'ny damper ny hazo malemy. Midika izany fa misy tsanganana solika matevina mihetsika ambony sy midina rehefa mandehandeha ny bisikileta, ary natao fotsiny ho an'ny fampisehoana tsy miovaova izany. Ary ny fiasan'ny ao an'ity damper ity dia tena mitovy amin'ny RockShox, deluxe dampers.
Ka misy deluxe sy super deluxe be dia be. Fa raha ny tena izy dia niezaka nanangona ny faran'izay tsara azo namboarina tamin'ity bisikileta ity izy ireo ho toy ny antso miverina miverina isa, izay iray amin'ireo zavatra kely malina ireo ary tsy azoko antoka ny antony mbola tsy nahavitan'ny olona azy tamin'ny tsindry fito famerena anao afaka mijery ny dial fotsiny dia mamadika azy ho fito. Izy io koa dia manana switch famatrarana toerana telo.
Miaraka amin'ireo mpitroka manaitra amin'ny toerana misokatra kokoa, azonao atao ny misafidy eo amin'ny sehatra matevina, salantsalany ary malefaka. Azonao atao tokoa ny manamboatra ny bisikileta amin'ny tany izay alehanao. Andao hilentika kely ao anaty antsipirian'ny sary Slash vaovao.
Misy ny maodely vita amin'ny aliminioma sy karbonina. Eto isika dia manana ny kinova Carbon 9.9 XO1, ny endrika lehibe indrindra amin'ny aluminium sy ny an'ny karbaona.
Ny fanavaozana lehibe indrindra dia ny fisian'ny habaka fitahirizana ao anaty frame. Efitra kely eto ambany miaraka amin'ny fitoeran-tavoahangin-drano. Azonao atao ny manokatra azy fotsiny, mitsambikina.
Ary avy eo azonao atao ny miditra amin'ny fitaovanao sy ny entanao hafa tianao hipetraka ao. Mazava ho azy fa tsy foto-kevitra vaovao izy io, efa noheverinay ho manam-pahaizana manokana izy io taloha, saingy heveriko fa hevitra tsara izany. Ary arakaraka ny anaovan'ny orinasa azy, ny zavatra tsara kokoa ao an-damosinao rehefa mandeha amin'ny dia lavitra ianao.
Trek dia manandratra ny haitao lohan'izy ireo. Amin'ny ankapobeny, fijanonana kely eto io. Io dia mametra ny fihodinan'ny kitanao.
Ny kinova teo aloha dia karazana polarizisialy satria nanakana ny tohin-tanana ho an'ny mpitaingina sasany izay te-hihodina aloha loatra. Bibilava mideza tokoa, afaka mihazakazaka ao ianao ary manakana ny fikirakirana ny bisikileta. Ity vaovao ity dia manana fahalalahana mihetsika bebe kokoa, heveriko fa 77 degre.
Ka ny tsorakazo dia afaka mihodina amin'ny loko tsara tarehy alohan'ny hamelezana ny sakana eo raha tsy tianao dia azo esorina satria novain'izy ireo ny endrik'ilay fantsona nidina. Mahitsy ny taloha, ankehitriny manana an'io miolakolaka kely io izy. Raha vantany vao nesorinao ny bokotra fandondonana dia azonao atao ny manaparitaka ny rotaka sy ny X- araka izay ao am-ponao.
tsingerina fifadian-kanina miserana
Ny antsipirian'ny endriny hafa dia misy fononteny ambany. Mpandeha betsaka no ho faly handre izany, anisan'izany ny fiarovana tsara tarehy. Ity mpiambina famonoana rojo ity dia tsara, manana mpiaro downtube malala-tanana ianao raha tianao ny hitahiry grama vitsivitsy saingy tsy azoko antoka ny antony itiavanao azy.
Mety hiaro ny fantsom-bokonao ihany koa io. Ka raha atsipinao any ambadiky ny kamio fitsangantsanganana io dia ho voahitsakitsaka ianao, hanampy amin'ny fiarovana ny zavatra tsy ho rovitra na ho rava mety hitranga. Ny rafitra dia mbola manana geometry azo ovaina amin'ny alàlan'ity puce kely ity eto.
Antsoina hoe Mino-Link Chip izy io. Noho izany dia mety hanana toerana avo sy ambany izy io izay manova ny zoro familiana amin'ny antsasaky ny degre. Mahatsiaro aho fa ny ankamaroan'ny mpitaingina nametraka azy io amin'ny toerana malaina ary miantso azy io ho tsara, saingy misy ny fanitsiana ary avy eo ny antsipirian'ny endriny farany, dia ny fivoahana ho an'ny fantson-tseza 34.9.
Manomboka mahita an'io amin'ny mpamokatra maro izahay satria mihalava ny halavan'ny paingotra. Mahafinaritra ny manana an'ity zana-tohotra lehibe kokoa ity, satpost lehibe kokoa sy mafy orina kokoa. Ity habe Large ity dia misy zana-kazo 170mm, ho hitantsika misimisy kokoa ny halavan'ny seza misy ny seza ary inona no tena mifanentana amin'ity fefy ity aorian'ity lahatsoratra ity.
Nolazaiko fa ny Slash dia voatsabo lava kokoa sy malalaka, midika izany fa ny zoro familiana dia 64.1 degre ankehitriny ao amin'ny sehatry ny looser. Miaraka amin'ity puce kely Flip ity dia azonao atao tsara kokoa hatramin'ny 64.6 degre raha tianao, ny refy amin'ny habe lehibe dia 486 milimetatra lava indrindra izao.
Marenina amin'ny bisikileta dimy sy amin'ity fihodinana kely ity. Ny halavan'ny rojo vy dia mitovy amin'ny bisikileta rehetra ao amin'ilay andiany ary 437 milimetatra. Trek koa nahatonga ny zoro seza ho mateza kokoa, izao dia 75.6 degre.
Ka tsy dia mideza toa antsika. Nahita azy tamin'ny orinasa hafa vitsivitsy aho, saingy miharihary kokoa noho io teo aloha. Ary tsara ny manamarika fa ny haben'ny Trek dia nanampy habe fanampiny.
Ka misy habe antonony - lehibe, lehibe, XL. Ka tokony hisy habe dimy feno hanamboarana ity bisikileta ity amin'ny haben'ny mpitaingina azy. Ity bisikileta eto ity dia ny kinova 9.9 XO1.
Ary mitentina 8000 $ izany. Fantatro fa vola be izany, saingy ny vaovao tsara dia manome Trek Slash Aluminium ho an'ny $ 3.500 i Trek. Noho izany dia misy isa marobe amin'ny vidin'ity bisikileta ity.
Inona no azonao amin'ny $ 8000? Manana RockShox ZEB aho. Izay misy dia 170 milimetatra. Izy io dia manana ny Super Deluxe Shock izay nolazaiko teo aloha.
Manana kodiarana karbaona Bontragers izy ireo. Manana drivetrain XO1 koa izy ireo. Sram XO1 ity, izany hoe lamasinina fiara miaraka amina kitapo 12.
Ny freins koa dia fehezin'i Sram. Ary izany ny kaody RSC, misy baoritra karbonina Bontrager ary tsipika fandefasana dropper Bontrager. Ireto misy singa ao an-trano ihany, fa ny fampiatoana, ny drivetrain ary ny freins dia singa avo lenta avokoa.
Ary eo no niavian'ny vidiny avo kokoa. Ny lanjan'ity bisikileta ity satria mipetraka eto dia 32.5 pounds ho an'ny habe iray lava.
Ity no bisikileta hazavana fahazavana faharoa ananantsika amin'ity bisikileta bisikileta dimy ity. (Hira fifaliana) Nahafinaritra sy mora ny fanamboaran-tsipika, farany nihazakazaka 30% aho tamin'ny tohotra aoriana. Ny zavatra iray nataoko dia ny nampidina ireo takelaka, 820 lehibe ny sakany ivelan'ny boaty, izay somary malalaka ho an'ny tsiriko.
Tiako ny paosin-tanana malalaka, fa ny 820 kosa somary ambonin'ilay tampony. Ka hamboariko amin'ny saiko 780 milimetatra ity. Tonga koa ny bisikileta Miaraka amin'ny tahony 35mm, aleoko 40 taona, noho izany dia natakalo izany aho mba hahatonga ny bisikileta hahatsapa ho mahazo aina kokoa sy hanome izay ilaiko, fa tsy misy zavatra tsy dia tsotra sy tsotra.
Tsy mila manao na inona na inona amin'ny spacer volume na mari-pamantarana na ny toy izany aho, vonona ny hiala ao anaty boaty. (Mozika ambony) Ny Slash dia nantsoina ho bisikileta enduro, fa na dia amin'ny hazakazaka enduro aza dia misy fiakarana kely. Ka nalaiko ity zavatra ity tamin'ny fiakarana lava be mba hahitako izay tsapany fa tsy volon'ondry volony akory dia azonao atao izany amin'ny toerana misokatra, indrindra raha mampiasa an'io toerana io ianao raha ampitahaina amin'ny teo aloha ny iray Version nanampy kely kokoa anti-squat.
Ka mpihanika mendrika io. Afaka mipetrapetraka fotsiny ianao ary tsy mila miahiahy, fa ny fahatsapana mitsambikina eo am-pandriana rano fotsiny. Ny hany zavatra mampiavaka ity bisikileta ity amin'ny sasany amin'ireo bisikileta hafa amin'ity fanandramana ity miaraka amin'ny zoro fantsom-pifamoivoizana.
Voamarikao ny halavan'ny eo aloha. Heveriko fa mipetraka amin'ny halavan'ny fantsom-batana ambony manodidina ny 649 milimetatra io. Azonao atao ny mampitaha izany amin'ny Propain, izay nataonay koa tamin'ny andrana ary 612 milimetatra izany.
Fahasamihafana tsara. Ary ireo isa rehetra ireo dia midika fa miaraka amin'io seza mihalava somary somary somary avoaka kokoa io dia hahatsapa ho mandroso ianao, maka toerana tsara fiakarana. Ary ny iray izay niasa tsara ho an'ny halavako dimy metatra.
Saingy rehefa nipetraka aho dia nahatsapa fa misy toerana malalaka kokoa ary tsy maninona izany rehefa miakatra na mitoto afo amin'ny alàlan'ny ferratas ianao? lalana vita amin'ny arabe fa rehefa manenjana ny kodiarana eo aloha indraindray dia mahatsapa fa somary lavitra lavitra. Ny fahatsapana fa kamo fotsiny noho ny manana zoro seza mihatsaravelatsihy somary steeper ihany, saingy indray, manana seza eto ny seza noho ny antony marim-pototra, azonao atao ny mametaka azy io, ary afaka maka toerana miakatra ianao izay mahatsapa tena tsara mandritra ny andro maro. Tsy dia somary mideza toy ny sasany ataontsika eto izany. (mozika mitohy) Nandany fotoana be dia be tamin'io aho sy ny kinova fanodinana taloha, noho izany dia mahaliana ny mahita ny fahatsapana izany.
Zavatra iray no azo antoka, tsy namoy ny hafainganam-pandehany io. Raha misy izany dia vao haingana dia haingana kokoa, mba hahafahanao mitondra hafainganana hafa noho izay eritreretinao mandra-pahatonganao mijery ny faritra manodidina anao. Heveriko fa izany no kalitao ankafiziko indrindra amin'izany.
Manana fahatsapana marina sy hentitra izay mamela anao hiala amin'ny frein, lalan-kely, mahitsy ny tsipika fianjerana raha tianao izany, saingy mbola mora ihany ny mamily zoro, mora mivaona. Somary lava kokoa ny fahatsapany satria lava kokoa izy io nefa fohy kokoa ny lamosina, mbola azonao atao ny mamontsina, mibontsina tsara. Amin'ireo bisikileta rehetra eto, heveriko fa ambony ao amin'ny lisitra misy ahy io, ny bisikileta mety hoentiko any amin'ny park de bisikileta, tiako ny mandany iray andro manao pipa vitsivitsy amin'ny zotra A ary avy eo afangaro amin'ny teknika faran'izay matanjaka. lalana.
Ity bisikileta ity dia mahavita ny hatairana tampoka ary mampisy fahasamihafana izany. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia avelako eo afovoany eo afovoany izy, nantsoiko hoe tsara, fa ho an'ny tsiranoka bebe kokoa, tsipika mitsambikina mahitsy, azonao atao ny manangana ny zavatra. Misy pop kely kokoa.
Ary avy eo raha tena mando izy ary mila hery fanampiny dia azoko atao ny mametraka azy eo amin'ny toerana ratsy satria ny fanamafisana maivana indrindra dia tena nanampy ny kodiarana hifikitra amin'ny tany. Heveriko fa ny iray amin'ireo zavatra manampy an'ity bisikileta ity hisongadina dia ny fandehany amin'ity mpitroka hatairana ity. Miasa tena tsara, tena mifanaraka tsara amin'ny bisikileta satria fotsiny nahazo ny habetsaky ny hery sy ny fanohanana.
Tsy voatery nilalao niaraka tamin'ny spacer volume aho araka ny voalaza tetsy ambony, fa misy toerana ho an'ny fandefasana tsara kokoa ho an'ireo mpitaingina na mpifaninana izay tena maniry ity bisikileta ity hampifanaraka tsara amin'ny filan'izy ireo. Ny faritra iray izay heveriko fa azo ahitsy kely amin'ny kinova ho avy dia ity halavan'ny rojo vy ity. Mahafinaritra, somary fohy kokoa, mora mandondona azy eny amin'ny tehezan-tendrombohitra mideza, mahafinaritra izany satria tena mampihetsika anao.
Saingy manana fahatsapana fotsiny aho fa ny mpitaingina lava kokoa dia mety mila lava lava kokoa any aoriana. Ny zavatra hitantsika amin'ny orinasa marobe dia samy hafa ny halavan'ny rojom-pitaterana ho an'ny bisikileta misy habe samihafa. Ary misy dikany betsaka izany raha ny hevitro.
Amin'ny ankapobeny, ity bisikileta ity dia toy ny bisikileta amin'ny hazakaza-tsoavaly, saingy mbola azonao atao ny mamoaka azy tsy amin'ny hazakazaka ary miala voly. (mozika upbeat) Ho an'ny fotoana fohy dia nifarana tamin'ny fotoana fahatelo haingana vitako tao amin'ny Slash, 1,6 segondra monja tao aorian'ny fotoana tsara indrindra.
Heveriko fa ireto bisikileta telo voalohany ireto dia tery avokoa raha toa ka mety hahatonga ny fahasamihafana ny bisikileta pedal fanampiny eto, saingy azo antoka fa haingana dia haingana ary ao anatin'ireto 3 voalohany ireto dia heveriko fa isa tsara. (mozika upbeat) Fotoana izao handinihana ny ampahany sasany amin'ity bisikileta ity. Andao hanomboka amin'ny Super Deluxe manonona ny Shock imbetsaka, fa tena nahavariana ahy izany.
Nety tsara izany. Mbola manana ny sasany amin'ireo teknolojia fananana ao amin'ny Trek izy io. Azonao atao ny mametraka zavatra hafa eto raha tsy mankasitraka tanteraka an'io ianao, saingy nahomby izany.
Ny tonony dia mifanaraka tsara amin'ny bisikileta ka asa tsara o Trek sy ny injenieran'ny RockShox, nisafidy an'io izy ireo, ny ZEB teo aloha dia niasa tsara ihany koa tamin'ny bisikileta dimy ananantsika, ny hafa kosa manana FOX 38 ka mihainoa tsara raha manandrana mahita ity ZEB ity ny toerako tsara vintana miaraka amin'ny forks roa. Misy fahasamihafana kely amin'ny fahatsapan'izy ireo eny an-dàlana. Sarotra ny mametraka teny, fa amin'ny ankapobeny mora apetraka, tsy misy manahirana.
Niasa tsara tamin'ity bisikileta ity ny Zeb. Andao hiresaka ity lahatsoratra ity. Ity dia manana ny Elite Dropper Post vaovao an'i Bontrager.
Nilaza izy ireo fa nampita ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha, mbola tsy tena haingana be toy ny sasany amin'ireo safidy hafa any io. Ary avy eo misy ny zava-misy fa ny halavan'ny ankapobeny dia lava ary tonga miaraka amin'ny milina 170 milimetatra, izay tsara, amin'ny tontolo tiako indrindra dia mety hisy iray milatsaka 200 milimetatra. Ka nanana Bontrager aho, ilay vaovao teny an-tanana.
Ka napetrako teto ny milimetatra 200, tsy afaka niditra aho. Tsy nanana toerana fametahana ampy aho mba hiasa ity lahatsoratra ity ka afaka mitaingina dropper lava be aho. Saingy amin'ny ankapobeny ity andalana ity dia Elite Dropper ary tsapako fa mbola misy toerana azo hatsaraina ao.
Ity dia miaraka amin'ny cranks 175 milimetatra. Ankehitriny tsy olana lehibe ho an'ny mpitaingina lava sy lava kokoa izay manana koro lava kokoa izao. Fa tsy maintsy tadidinao fa bisikileta enduro ity.
Handeha mamakivaky tany mifangaro ianao, matetika amin'ny toerana be vato. Dimy milimetatra fotsiny izy io fa tsy afaka mampisy fahasamihafana eo amin'ny fikapohana vato na tsia Heveriko fa ny famaritana ny 170 fotsiny no lalana tokony haleha. (mozika miakatra) inona avy ireo tombony azo amin'ny Trek Slash? Eny, hiteny ity fefy maivana sy henjana ity aho.
Azo antoka fa iray amin'ireo zava-nisongadina. Mamporisika anao handeha haingana fotsiny izy io, miaraka amina feon-damper mahafinaritra ity dia mahatonga azy io ho toy ny bisikileta an-dàlambe, miampy ny maha-habe, habe dimy ary karbona sy aliminioma azy ireo. Ka amin'ny ankapobeny dia misy fihenam-bidy ho an'ny mpitaingina be.
Ny fitehirizana ny frame dia endri-javatra lehibe ihany koa, mahafinaritra ny fahafahana miala amin'ny lamosina sy ao anaty frame fotsiny. Eny, ary izany dia misy amin'ny frame karbonika sy aluminium. (mozika mitohy) Raha ny maharatsy azy dia miteny aho fa ny zoro seza dia mety ho kely steeper, izay hanatsara ny mety fotsiny rehefa miakatra.
Ary ny nitpick kely farany dia ny halavan'ny rojo vy. Tiako ny mahita ny kinova an'ity izay misy fanitsiana kely amin'ny halavan'ny rojo vy. Averina indray, mba hanomezana fahatsapana voalanjalanja kokoa ho an'ny haben'ny mpitaingina azy. (mozika faly) Ho an'iza ity Slash ity? Eny, mbola mitazona ny toerany ao amin'ny tandavan'i Trek ho bisikileta enduro tsara indrindra izy io.
Afaka nahita mpamily tsy miankina iray aho izay nahazo vokatra tsara teto. Manentana anao handeha haingana izy ity, ka mitady bisikileta eny an-dalana aho, fa azonao atao ny manamboatra azy io amin'ny masinina an-tendrombohitra rehetra raha te-hikambana amin'ny faritra maivana kokoa ianao ary hanao azy ho bisikileta fitetezam-boalavo rehetra. Ny fahaizan'ny toetr'andro eto, ary ireo fanatsarana rehetra ireo dia nandoa izy ireo raha azonao izany, ity ilay Trek Slash.
Araho hatrany ny atiny misimisy ao amin'ny Pinkbike Field Test, ao anatin'izany ny Huck to Flat izay malaza indrindra. Aza adino ny tia sy misoratra anarana ary misaotra anao nijery. (mozika upbeat)
Bisikileta tsara ve ny Trek 1000?
nybisikiletaizay manolotra fampisehoana miavaka ho an'ny olon-tiana an-dalambeTrek 1000saika tonga lafatrabisikileta. Na dia mahita marary ratsy aza ianaoTrek 1000, Sarobidy lavitra noho izany ny mahazo azy io sy mamerina azy io amin'ny laoniny.24. 2018.
Miorina amin'ny lahatsoratray GCN momba ny bisikileta mora vidy mifanohitra amin'ny superbike, dia nieritreritra aho hoe, afaka mamadika bisikileta mora vidy ho superbike ve aho nefa amin'ny teti-bola? Inona no ataoko amin'izany? Mazava ho azy fa havaoziko ny singa itas ary mety hataoko milay mangatsiatsiaka ihany koa izy ireo. Ankehitriny dia nametraka teti-bola £ 900 aho, $ 1,100 eo ho eo, satria raha ny marina dia tsy te handany £ 1.000 aho. Ny zava-misy dia apetrako amin'ny superbike ity bisikileta ity na taloha na taorian'ny nanaparitako azy.
Mazava ho azy, tsy vitantsika ny manangana ity bisikileta ity amin'ny teti-bola fotsiny ary mampitaha azy amin'ny superbike. Fa kosa, mila manoratra ara-tsiantifika ny valiny isika hahitantsika ny tsy fitovizany. Fa bebe kokoa amin'izany.
Tena mitebiteby be aho rehefa eo amin'ny pedal. Mety mila mandeha mamaky ny arabe kely aho. (Air tabataba) (lakolosy vy) Ka noho io tetik'asa io dia nanapa-kevitra ny handeha tany eBay aho hitady ity bisikileta mora vidy ity, ary nandany vola be isak'alina aho nandritra ny taona maro nitetezana eBay tetsy sy teroa mba hahazoana tambiny. Tena za-draharaha aho raha ny amin'ny fahalalana ny zavatra tadiavina.
Torohevitra iray tena azoko omena anao dia ny mitady ireo lahatsoratra voatanisa kamo izay misy lesoka amin'ny tsipelina. Iray amin'ireo tranonkala tiako indrindra amin'ity ny FatFingers.com, izay ahafahanao manoratra ilay teny tadiavinao ary manome anao fiovana manodidina an'io tsipelina io ka antenaiko fa afaka mahita zavatra betsaka ianao dia ny fitehirizana ny fikarohana ka ampandrenesina foana aho rehefa iray lisitra mifanaraka amin'ny fikarohana nataoko voatahiry no voatanisa.
bisikileta matavy elektrika radmini
Farany nalamina na nitady tao anatin'ny halaviran-toerana voafaritra ihany koa dia toetra tsara satria maro ny olona tsy te-handefa bisikileta eo an-toerana ho anao, na amin'ny raharaha sakaizany dia nividy bisikileta aza izy tany avaratr'i Ekosy sy tamin'ny hazakazaka fampitaovana. misaotra ireo sakaizany izay nentina tany aminy tany atsimo andrefan'ny Angleterre tamin'ny toerana cradle isan-karazany. Amin'ny tranga misy ahy e, tsara vintana aho amin'ny zavatra hitako. Nahita ity Lance Armstrong modely an'ny hazakazaka Trek modely 18 na 19 taona lasa izay aho.
Feno miaraka amin'ny vondrona Shimano 105. Nisy bisikileta vaovao nampiana Nisy fotoana te-hividy bisikileta alimina aho, satria amin'ity teti-bola napetrako ity dia mety hampidi-doza ny fividianana karbaona, satria tsy hita foana ny fahasimbana, izay azo inoana fa hatao toy ny amin'ny aliminioma. bisikileta Ny toerana dia hahita olana any. Fanampin'izany, andao hatrehana izany, ny superbikes dia azo atao amin'ny aliminioma ihany satria Pete Sagan dia nanao ny iray tamin'ny Tour Down Under tamin'ity taona ity.
Tsy momba ny karbaona fotsiny io. Ataovy ao an-tsaina izany. Ny tena zava-dehibe koa dia ny fifandraisana tsara amin'ny mpivarotra, koa raha ity raharaha ity, dia nametraka fanontaniana be dia be aho ary ny fananan'ny mpivarotra hevitra 100% tsara, izay mahatonga ahy hatoky tena.
Marina fa ity dingana iray ity dia mety ho mampatahotra ary mety tsy ho an'ireo tsy zatra fiofanana satria mety hitranga ny fividianana bisikileta amin'izao vanim-potoana izao. Ny mety hisamborana ny fononteny ambany na ny seza fipetrahana, ohatra, eny izay afaka maharitra fotoana fohy alohan'ny tena hisarahanao amin'ny frame. Saingy, heveriko fa vonona ho amin'ilay asa amin'ity iray ity aho, ka alao io. (mozika mangina) Eny, nahavita adiny iray teo ho eo avy teo amin'ny birao aho, ary fiara kely nahafinaritra izany.
Somary mitebiteby kely aho miaraka amin'ny lolo vitsivitsy ao an-kiboko satria bisikileta vaovao isan'andro io ary tsy azoko antoka hoe inona no ho azoko. Eny, fantatro fa niresaka tamin'ny mpivarotra aho ary nahita sary ary nangataka sary bebe kokoa ary faly aho, fa izany no ho fototry izany, ny bisikileta mora vidy dia ho lasa superbike, andramo. (Mozika faly) Johnny .-- Salama. - Salama, John - faly mihaona aminao. - Mahafinaritra ny mihaona aminao, mandrosoa. - Andao hojerentsika izay novidiko. (mihomehy) (mozika misongadina) Marina, Johnny, eto, ilay hatsarana, ilay biby novidiko taminao ary tsara, efa nijery manodidina aho ary tsara dia tsara, mba ho ara-drariny, sa tsy izany? Somary kely foana aho, rehefa mividy zavatra amin'ny eBay dia somary tsy milamin-tsaina foana aho, fa toa lehilahy mendrika ihany ianao na izany aza. (Mihomehy) - Tsia, nanjaitra anao aho, nanjaitra anao aho.
Tsia, bisikileta tena tsara io, nanompo ahy tamin'ny marina aho. Ka nanavao ny bisikileta aho ary roa taona lasa izay. Nasiako rojo vaovao eo amboniny, saingy tsy nanova ny cartridge aho ka angamba tsy nanao izany. - Ie, tsy maintsy hitako izany.
Ary koa, manana tariby misaraka eo ianao, fa tsy hotsoahako ny sandrinao noho izany. Malahelo ve ianao fa hiala izy io? - Tena malahelo aho fa hiala io. Mety ho tadiaviko ihany. - Ie, raha ianao - raha vantany vao amboarinao. - Andao hojerentsika izay ataoko amin'izany.
Heveriko, eny, mbola manantena aho fa hanaikitra ny sandriko ianao. Angamba hanome izany ho an'i Auc isika. Avy eo azonao atao ny manolotra azy. - Eny, vidio indray. - Eny, ho anao aho Aza mandany fotoana intsony.
Aza hadino anefa ny mijery ilay fantsona satria heveriko fa ho hitanao fa nanjary bisikileta faran'izay tsara izany, ho be fialonana ianao amin'ny farany, fa misaotra betsaka anao noho ny fialan-tsasatra amin'ny asa - Eny tokoa. - avelao aho ho tonga eto hitsidika anao. Okay, misaotra betsaka an'i Johnny fa nahatonga anay hahatsapa tena tongasoa eto.
Avy eo mijery ilay bisikileta izahay. Ka ny alim-baravarankely Trek aloha no niadiantsika. Ny tena tiako amin'izany dia ny fisian'ny fantsony ambony mitsivalana.
Tena bisikileta mijery mahazatra, mampiady hevitra, raha mety kely. Vondrona Shimano 105 feno. Ity vondrona ity dia avy amin'ny taona 2000 ka hatramin'ny 2003 hatramin'ny fahatsiarovana, efa elaela ihany izao ny ampahany amin'ny bisikileta izay tsy mahazatra no eritreretiko fa ny lasely, izay angamba fampivoarana ary koa ny kodiarana.
Kodiarana Shimano vaovao kokoa izany ary koa ireo kalipera, izy ireo dia Shimano Tiagra. Ankehitriny ny bisikileta ihany, mety handany dimy minitra eo amin'ny sehatry ny asa fotsiny mba hahazoana antoka fa milamina tsara ny peratra sy ny freins alohan'ny hanaovantsika ny tapany voalohany hanaovana ilay fitsapana fampitahana. Saingy amin'ny lafiny rehetra dia heveriko fa manana bisikileta tena tsara aho eto.
Headset, Tha Ao anatin'ny toe-javatra tsara izany, izany dia diacompe AheadSet, mbola kit tsara mijery ihany. Fehiny ambany, milalao kely tokoa. Averina amin'ny toeran'ny asa angamba azoko atao ny mandamina izany, iza no mahalala.
Mahaliana ny rojo 53/39 napetraka eo amboniny, satria nofinofy fotsiny ny fantsom-pifandraisana tsara. Fa amin'ny ankapobeny, faly aho. Ka hatramin'ny dimy minitra voalohany sisa azoko lazaina dia bisikileta tena tsara io ary lehibe kokoa noho ny asa, fa tsy avelantsika eo izy, sa tsia, tsia, tsia, tsia, rehetra ny faritra dia nosoloina tokoa, fa alohan'ny ataoko dia tsy maintsy averiko amin'ny làlana tsara io mba hampisehoana azy ireo any amin'ny birao satria ny iray amin'izy ireo dia tsy maintsy mitondra fiara mba hahazoantsika fotoana fanamarihana ka raha ampitahaintsika ao anatin'ny roa herinandro hitantsika tsara ny fandrosoana.
Manontany tena aho hoe inona no ho hevitr'izy ireo raha entiko any amin'ny birao izany. Ny zavatra hahafaly azy ireo dia ilay hoe ny solosaina bisikileta, hoy i Johnny tamiko, dia tsy niasa tamin'ny sensor ary ankehitriny dia mandeha izany. Telo, oh 9,3 kilaometatra isan'ora, 13 degre Celsius. (mozika mangina) Ankehitriny manantena aho fa nanao veloma ny bisikileta fotsiny ianao satria ity no fotoana farany hahitanao an'izany.
Hisy fambara kely ho anao amin'ny herinandro ambony. Araho hatrany ity fanovana ity ary, toy ny mahazatra, tadidio fa tianao ity lahatsoratra ity ary zarao amin'ny namanao. Omeo ankiben-tànana ole lehibe izy ary maninona raha zahana ny GCN sy fivarotana ao amin'ny Shop.
GlobalCyclingNetwork.com izay ananantsika zava-tsoa an-taonina maro ho anao hanandramanao ary izao ho an'ny lahatsoratra tsara iray hafa, ahoana no anaovanao azy fotsiny dia tsindrio eto.
Tsara kokoa ve ny fitsangantsanganana na ny manokana?
Tsy misy mpandresy mazava. Samy manolotra bisikileta sy singa mitovy amin'ny vidiny mitovy.dianymanana bisikileta isan-karazany malalaka azo isafidianana raha ampitahainamanokana. Amin'ny ambaratonga fidirana dia mahazo kely ianaotsara kokoafaritra rehefa mandeha miarakamanokana.
Manaraka izany dia hiresaka momba ny bisikileta eny ambanivohitra isika. - Azonao atao ve ny manao ny outro indray, - Ie. Aza mijery anao? (mihomehy ny rehetra) - 'Hey Max, tokony hanao ny outro izao ve aho?' (mozika mahery vaika mahery) (mikiakiaka bisikileta) (kapoka mahery vaika malefaka) - Salama daholo ary miverina amin'ny fitsapana an-tsaha.
Ary androany dia ora ambony latabatra ary miresaka momba ny bisikileta amin'ny hazakazaka izahay. Sarah Moore dia teo amin'ny Epic Specialized Epic vaovao, ilay scalpel Cannondale vaovao, Treks Supercaliber ary Canyons Lux. Vahiny manokana anio Mike Kazimer avy any Etazonia.
volan'ny kodiarana bisikileta
Tena te hiaraka amiko miaraka amin'i Lycra izy, saingy voafandrika any amin'ny fanjakana izy, mihidy ny sisin-tany Androany no antonony ny resaka, amin'ny alàlan'ny solosaina.- Ny majika amin'ny internet. Tena malahelo aho manana an'i Lycra ary tsy afaka mitondra ilay haingam-pandeha ala miaraka aminao.- Hidina tsy ho ela aho ary hitsidika anao Kazand dia hiara-mitaingina lycra kely izahay. - Okay.
Andao aloha hanomboka amin'ny fanontaniana iray izay tian'ny rehetra ho fantatra. Sarah, inona no bisikileta tianao indrindra tamin'ireo efatra ireo? - Ka heveriko fa tena tiako ilay Epic Manokana, ity géometra maoderina ity izay tena mamela heloka amin'ny resaka traction, tena izy io, fa ny Cannondale Scalpel, nieritreritra fotsiny aho fa ny fampiatoana dia azo vinavinaina kokoa amin'ny andro lava kokoa. (Niaiky i Mike Levy nifanaraka) - Eny - mikorontana tokoa ny hazakazaka amin'ny Tompondaka Erantany amin'izao fotoana izao.
Fantatrao, (Mike Levy hums in agreement) olona somary manambany ny zavatra ataon'ireto olona ireto satria manao lycra. Tsy manao lamboridy lohalika izy ireo ary tsy manana endrika feno ianao, ka mieritreritra ianao fa mora loatra ilay tany. (Mike humy nifanaiky) Canyon Lux, mety tsy ny safidiko voalohany, kely kokoa ny fantatrao, tsy mora ny mitaingina ireo faritra matevina kokoa.
Tsy dia tsara daholo ny fidirana. Ny tiako holazaina dia hoe raha te handeha mitaingina soavaly aho Amin'ny elanelan'ny havoana iray kilaometatra, angamba ity ilay bisikileta nofidiako, saingy tsy izany no tiako indrindra, Ka i Sarah, izany dia mitarika amin'ny fanontaniana manaraka.
Amin'ireo bisikileta rehetra ireo, ny Lux no tianao indrindra? - Ie. Ho an'ny zavatra roa. Heveriko fa tsy dia mavitrika loatra ilay fampiatoana, tsy nampiasa tsara ny dia lavitra 100 milimetatra.
Nahatsapa ho mikorontana aho isaky ny mandeha amin'ny bisikiletako, tsy nahatsapa ho fanaraha-maso fotsiny aho, nanana io fotony tena lava io, ary avy eo ilay combo lockout niaraka tamin'ny tsatokaty, (Mike Levy nifanaraka) koa tena mahasosotra ny mitondra azy. Ka, eny, heveriko fa ny Canyon Lux dia tsotra iray fa ho ahy, fantatrao, tena tsy te-handany fotoana bebe kokoa amin'ity bisikileta ity aho - ka Scalpel no tianao indrindra, ny Lux dia mety ho tianao indrindra, na tena tianao tsy ankafizin'ny ankamaroan'ny olona, ​​fa misy iray amin'ireo bisikileta tadiavinao handanianao fotoana bebe kokoa ve? Lazao fa mahatsapa ianao fa mahita an'izany, fa mila fotoana kely kokoa handrobohana tena ao? - Ie. Heveriko fa Epic manokana Tena faly aho ary mieritreritra aho fa satria nanao fitsapana miverina amin'ny hafa amin'ireo bisikileta hafa rehetra ireo dia mila fotoana kely kokoa fotsiny ny ati-doha (Mike Levy nifanaraka) mba ho zatra izany ary koa rehefa mitaingina azy ianao, dia fantatrao fa mora kokoa ny zatra toy izay mitaingina bisikileta mahazatra sy feno fampiatoana bebe kokoa.- Ka i Sarah, ny Epic mifanohitra amin'ny scalpel, tsy dia lavitra ny isa geometrika, fa ny Epic dia manana an'ity ati-doha ity - Function, io karazana valizy tsy mihidy io amin'ny ankapobeny izay mahatonga azy hahatsapa ho hafa? - Ie, heveriko fa tsara fa ny atidoha dia midika fa tsy mila mieritreritra ianao ary tsy mila mampiasa lockout mihitsy.
Bara fitantanana faran'izay madio. Ary avy eo, eny, rehefa tena reraka ianao, dia tsy te-hieritreritra ny hamaha ny fampiatoana alohan'ny hidiranao, zavatra ara-teknika iray, azo antoka fa tao anatin'ny tarehin-javatra rehefa niakatra havoana ianao ary avy eo nanadino hamaha izany, ary avy eo amin'ny antsasaky ny havoana heverinao fa tena tsy dia misy dikany amin'ny bisikileta misy ahy aho, izay sarotra nitaingina voalohany, raha tsy mila mieritreritra momba azy ianao, tsara izany. Ka heveriko fa ny Brain manokana dia manao zavatra marobe ary manantena ny handany fotoana bebe kokoa amin'izany aho - iza no bisikileta haingam-pandeha indrindra amin'izany? Moa ve ianao mihevitra ny fahombiazany, mifototra amin'ny fitsapana fahombiazana ary ny fotoana fotoanao rehetra, izay no haingana indrindra? - Tamin'ny fitsapana fahombiazana, ny Canyon Lux no haingana indrindra tamin'ireo moto rehetra ireo.
Epic manokana dia miadana kokoa ny enina segondra mino aho raha mahatadidy tsara isika. - Yup, Yup.- Ary noho izany tamin'ny fihetsiketsehana haingana dia nahaliana satria toa saika kapoka tanteraka izany. (Mike humy nifanaiky) Ka noho izany ny Canyon Lex no tena niadana indrindra tamin'ny filatsahan'ny fotoana, ary avy eo nahazo ny laharana faharoa ny Spécialiste, ary ny scalpel Cannondale no - eny - dia - eny - tena mavitrika tokoa, mamela heloka na iza na iza no haingana indrindra amin'ny fizahana andrana Rudy ara-teknika tena tsara.- Ie, heveriko fa ohatra tsara amin'ny fitsapana tontolo tena izy io, fantatrao fa ity Fireroad Climb ampiasaintsika amin'ny fitsapana fahombiazana ity dia tsy midika izany fa any ivelany no misy azy. , saingy tena tsy izy ary nandresy tamin'io fitsapana io.
Saingy amin'ny tadin'ny fotoana misy antsika na ny lalan-kaleha tokana dia sarotra, malama. Tsy nandeha tsara izany. (Sarah hums nankasitraka) Eny - Ary noho izany ianao dia handany fotoana bebe kokoa amin'ny hazakazaka cross country, dia eo am-pelatananao - Marina - izany hoe, fantatrao, kely - Eny - sarotra kokoa - Izao ianao dia 'mila tena manana traikefa, ireto bisikileta ireto dia namboarina ho bisikileta hazakazaka amina Tompondaka Erantany, aiza no ahitanao ny hoavin'izy ireo? Mieritreritra ve ianao fa ny bisikileta mamela heloka kokoa no ho avy, fantatrao, ny sezanao ary ny sezanao? zavatra toa izany? Toy ny hoe horesahina ilay sokajy Levy, saingy mieritreritra ve ianao fa misy zavatra sasantsasany amin'ireo bisikileta efatra ireo izay tena miavaka izay tena tianao, raha ny lalana aleha? - Fantatrao, ny Canyon sy ny Trek Supercaliber, mety ho hitantsika fa mahazo zoro fantsom-bolo somary fisaka kokoa izy ireo, somary tratra lavitra kokoa.
Saingy heveriko fa tsy hahita fiovana mahery vaika amin'ity sokajy ity isika satria mpanavakavaka. -Eny.- Fantatra fa voaporofo izy ireo, saingy ny tiako holazaina dia misy atleta an-taonina izay minomino foana.
Raha nandresy tamin'ny moto ianao dia tianao izany - marina.- hafa tanteraka? Ary na dia toy ny amin'ny hazakazaka fanombohana betsaka aza dia mbola mila izany fikirakirana mailaka izany ianao. Raha toa ianao ka olona 160 ao (Mike Levy no nifanaraka) tamin'ny hazakazaka sasany ho an'ny lehilahy, toy ny vehivavy 85 sy 100 ny vehivavy, tokony ho afaka hamakivaky ny lalanao ianao, handray fanapahan-kevitra haingana, ary fantatrao bisikileta fohy kokoa no ho tsara kokoa amin'izany. - Ka manana ny tianao indrindra izahay, ny tianao indrindra, izay tianao holaniana lavitra kokoa, nefa nisy bisikileta nanaitra anao ve? Inona no bisikileta nalainanao tamina fiheverana vitsivitsy mialoha ary tena nahagaga anao anao raha namoaka azy teny am-pitadiavana? - Hoy aho hoe Cannondale Scalpel.
Tsy nanantena ny hiala tamin'ity aho ary ity (eken'ny Mike Levy) no bisikileta tiako indrindra. Ary avy eo ny tiako holazaina, amin'ny sokajy ary koa amin'ny ankapobeny, dia gaga aho fa nahatsapa ho nahazo aina toa ahy, fantatrao, ny manao ski amin'ny fidinana amin'ireo. Fantatrao, 10 taona lasa izay, rehefa nanao hazakazaka an-tanety aho, tsy nahatsapa ho nahazo aina tamin'ny fidinana (nihomehy i Mike Levy) - Fotoana hafa tanteraka izao - tiako ny bisikileta samihafa, fohy kokoa.
Ary noho izany, andao jerena izao ireto bisikileta ireto ary fantatrao rehefa ianao, 'Rehefa mitaingina bisikileta ianao na bisikileta enduro, dia mieritreritra ianao hoe,' Phew, fantatrao fa isa misy daty ireo. 'Fa raha mijery bisikileta eny an-dàlambe ianao 10 taona lasa izay, (Mike Humy nanaiky tamim-pankatoavana) ny fomba tokony nanaovantsika lamba feno tarehy sy lohalika. - Mahitsy? (mihomehy izy telo rehetra) - Mametraka ny fiainantsika amin'ny laharana isika.
Isaky ny mandeha izahay - Tena marina! - amin'ny hazakazaka. - Eny eny. Ka ireto bisikileta ireto dia mahatsapa ho mahazo aina kokoa amin'ny maha-sokajy anao ary voafehy ianao - Ka noho izany dia ho an'ny dinika ho an'ireo bisikileta amin'ny hazakazaka an-tsaha any an-tsaha no manandrana an'i Kaz amin'ny bisikiletiko ary mieritreritra aho fa hanao dia kely ny tandem miaraka.
Manaiky izany ve ianao, Kaz? Hanana lycra aho - - Toa tsara amiko izany. Tiako ho eo alohan'io. Nametraka lycra aho. (Mihomehy i Sarah) Eny ary.
Andao hihaona izany. (mozika mahery vaika)
Fa maninona no malaza be ny bisikileta Trek?
dianyno marika lehibe tokana mbola vitabisikiletaany Etazonia ary mandany be amin'ny fanentanana izy ireo. Noho nymalazaantso avo, vokatra isan-karazany ary ezaky ny R&D - safidy mora ho an'ny fivarotana izy ireo. Antony iray mahatonga azy ireo hanintona ireo magazay manara-penitra sy matihanina, izay manampy ny fampiantsoana azy ireo ihany.
Firy ny hafainganan'ny Trek 1000?
54cmTREK 1000Aluminium 24HafaingananaRoad Bike 5'6 'mankany 5'9' Amerikana vitaTREK 1000bisikileta amoron-dalana miaraka amina alim-pito alimo. Shimano Sora dia nampifangaro ireo shifters niaraka tamin'i Sora derailleurs sy crank triple.
Manana fahaizana manokana ve i Trek?
Mike Sinyard dia nijanona ho tompon'ny ankamaroan'ny orinasa. Tamin'ny 2016,manokanadia iray amin'ireo marika bisikileta lehibe indrindra miasa any Etazonia, miaraka aminydianyPaikady bisikileta sy bisikileta goavambe.
Tsara kokoa noho ny goavambe ve ny Trek?
Amin'ny ankapobeny,goavam-betsy dia lafonoho i Trek. Noho ny toerana nanamboarana azy ireo,goavam-bedia afaka mitazona ny vidin'ny bisikiletany ho ambany.dianyNy bisikileta dia manolotra mitaingina teti-dratsy, fa ny bisikiletany kosa, amin'ny salanisa, dia lafo kokoa vidiana.
Fa maninona no lafo be ny bisikileta Trek?
Ny ankamaroan'ny faritra misy azy ireo dia nataon'ireo mpanamboatra azy ireo ihanybisikiletaho an'ny marika maro hafa. Mandra-pahatongan'ny vidiny mihoatra ny dolara an'arivony maro, nybisikiletadia mitovy amin'ny vidiny mitovy amin'izanybisikiletaavy amin'ny mpifaninana rehetra aminy.
Tsara kokoa noho ny Trek ve ny manokana?
Bisikileta tsara ve ny dia an'i Lexa?
Na dia tsy manome ny sofin'ny sofina amin'ny bisikilety sasany aza ny Lexa S dia manondrika mihoatra ny lanja eo amin'ny lafiny bika aman'endrika, fampiononana, lanja amin'ny vola ary amin'ny fanomezana fitsangatsanganana mahafinaritra sy mahafinaritra. Bisikileta azo antoka fa hitazomana mpitaingina vaovao, ary azo inoana fa hitazona azy ireo ao anaty vala Trek rehefa mihodina amin'ny fanavaozana.
Iza no bisikileta mora indrindra ho an'ny vehivavy?
Ny Lexa S no faharoa mora indrindra amin'ny bisikiletan'ny alàlan'ny alim-baravarankely vita amin'ny alimina ao Trek, izay tsy mitovy amin'ny tandavan-tsolika Silque, Madone ary Emonda. Izy io dia manana singa Sora lafo vidy nefa tsara kokoa ary ny endriny manokana an'ny vehivavy geometra WSD 100 Series Alpha vita amin'ny alimina vita amin'ny alim-by vita amin'ny karbaona Trek.
Ny LexA SLX dia bisikileta mandeha tsara?
Na dia be vola sy manokana aza izany mba hahatongavana ho bisikileta tsara indrindra, ny Lexa SLX dia manao bisikileta haingana be haingana.